सहकारी विभागले बचत र ऋणको स्प्रेड दर तोकेपछि ब्याजदर संस्थाको साधारणसभाबाट तोक्न पाउनुपर्छ « Media Club Nepal
६ आश्विन २०७७, मंगलवार १४:३३
सहकारी विभागले बचत र ऋणको स्प्रेड दर तोकेपछि ब्याजदर संस्थाको साधारणसभाबाट तोक्न पाउनुपर्छ
प्रकाशित मिति : ६ आश्विन २०७७, मंगलवार १४:३३
अध्यक्ष : परोपकार महिला साकोस
भीमेश्वर नगरपालिका–६, दोलखा
सन्दर्भ व्याजदर खासै यसरी सहकारी विभागबाट नै तोकिनु पर्ने होईन । बचत र ऋणको व्याजको स्प्रेड दर ६ प्रतिशत कायम हुनु पर्ने कुराबाट नै संस्थामा व्याजदर निर्धारण गर्न बाटो खुलिसकेकै छ । यसको अर्थ व्याजदर कायम र पारित सरकारबाट गर्ने कि संस्थाको वार्षिक साधारणसभामा सदस्यहरू सँगको छलफलबाट पारित हुने हो यो अलि अन्योलताको विषय बनेको छ ।
सन्दर्भ ब्याजदर निर्धारण त्यस्ता सहकारीहरूलाई आवश्यक पर्दछ, जुन सहकारी संस्था नीति, विधि, प्रविधि र मापदण्डअनुसार चलेका छैनन् । ती संस्थाहरूले हिजो सन्दर्भ ब्याजदर कायम गरेदेखि नै लागु गरे वा गरेनन् ?
बाँकी अरू संस्था जो सिष्टममा चलेका छन्, तिनहरूले जारी गरे पनि लागू गर्न समस्या छैन । सन्दर्भ ब्याजदर तोक्नु वा संशोधन गर्नु मात्र ठूलो कुरा हुँदैन, यो कार्यान्वयन भयो कि भएन भनेर अनुगमन गर्ने निकाय खोई ? अनुगमन तीव्र बनाएर सबै सहकारीलाई लागु गराउनु चाहिँ महत्वपूर्ण विषय हो ।